Wararka - Waxqabadka iyo faa'iidooyinka dharka baaskiil wadida
Waxqabadka iyo faa'iidooyinka dharka baaskiil wadista
Dharka Baaskiilku waa dhar shaqeynaya, sida amniga, wick, neefsasho, fududahay in la dhaqo, dhaqso-qalajin, iwm maaliyada baaskiilka Dharka bushkuleetiga ee wanaagsan waa inuu lahaadaa neefsasho iyo dhuuqid, oo dhaqso u siidaaya xaddi badan oo dhidid ah oo jirka ka dhigaya mid qalalan. Qeybta hoose ee maaliyada baaskiilku waa inay ahaato mid adag, si wax ku ool ah u yareynaysa daalka muruqyada, iyo gogosha iskuxirta waa inay noqotaa mid jilicsan oo leh awood hawo wanaagsan. Aynu ka hadalno faahfaahinta dharka baaskiil wadista.
Saaxiibo badan waxay qabaan in midabka dharka baaskiilku aad u dhalaalayaan. Ma ogi in naqshadani tahay sababo nabadgelyo. Midabada huruudka ah, casaanka, buluugga ah iyo kuwa cadcad waxaa loo adeegsadaa si ballaaran. Sababta ayaa ah markii aad wadada fuushan tahay, darawalka gaariga iyo dadka lugeynaya ayaa si cad kuu arki kara masaafo dheer, iskuna day inaad ka fogaadaan shilalka taraafikada.
Saaxiibo badan oo hadda dooratay dharka baaskiil wadista ayaa waydiin doona, muxuu dharka dharka kore iyo kan hoose ee dharka baaskiilku u kala duwan yihiin? Sidaan hore u soo sheegnay, dharka sare waa inay dhidid dhididiyaan, dharka guntuna waa inuu dajiyo daalka. Cimilada darteed, markay hawadu qabow tahay, dharka diiran, neefsashada iyo dabayl-celiyaha ayaa badiyaa loo istcimaalaa, ama dharka dharka dabaysha iyo dharka neefsashada loo adeegsado isweydaarsiga iyadoo loo eegayo qaybaha kala duwan. Marka cimiladu kulul tahay, dhidid-dhiska, neefsashada, maro-dhaqidda iyo dhar-dhaqidda degdegga ah ayaa noqonaya xulashada koowaad, laga yaabee marka laga eego dhinaca caafimaadka, waxaa jira dhar jilicsan oo leh shuruudo sare oo ku-tallaalidda iyo deodoriation-ka. Dharka baaskiilku waa inuu noqdaa jirka sida ugu macquulsan si loo yareeyo caabbinta dabaysha sida ugu macquulsan. Dharka baaskiil wadiddu waa inay sidoo kale lahaadaan shaqada ilaalinta jirka, dharka baaskiilkuna waa inuu sidoo kale yeeshaa iska caabin abrasion ah, xitaa haddii shil dhaco, waxay si aad ah u yareyn kartaa aagga xoqitaanka. Marka labaad, waxaa jira barkimooyin fuulista surwaalada si looga hortago kala-fogaanshaha muddada dheer iyo cadaadiska u dhexeeya barida iyo kursiga, iyo in la ilaaliyo jirka.